Installing Gitbucket with Oracle Glassfish – Ubuntu MM
Installing Gitbucket with Oracle Glassfish
Application & Softwares Featured Guide Knowledge Tutorials ubuntumm
24/02/2016 27/05/2016 Aung Ko Ko
Github အသုံးပြုနေသူတွေ Online ပေါ်မတင်ဘဲကိုယ့်ရုံးတွင်း Local မှာ Github လို User Interface နဲ့ Git Server တစ်ခုထားချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Gitbucket ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ။ အလားတူ Local Git Server ထောင်လို့ရတဲ့ လူသုံးများတဲ့ တခြားဟာတွေရှိပါသေးတယ် ။ အဲ့ဒီထဲက Gitbucket ကိုလည်း စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်စေချင်ပါတယ် ။
Gitbucket ဆိုတာ Scala နဲ့ Develop လုပ်ထားတဲ့ Github Clone တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ Takezoe ဆိုတဲ့ ဂျပန်လူမျိုး Developer တစ်ယောက်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ Github အတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ မူရင်းကိုတော့ –
Gitbucket ကိုသုံးမယ်ဆို လိုအပ်တာတွေကတော့ –
အခုကျွန်တော်တို့စ Install လုပ်ကြည့်ပါမယ် ။တကယ်လို့ unzip မရှိရင်၊မတင်ရသေးရင်
နဲ့ Install လုပ်လိုက်ပါ ။Curl မရှိသေးရင်
**အခုရေးထားတာက Server ကိုကိုယ့်စက်ကနေလှမ်းပြီး Remote Install လုပ်တဲ့အနေအထားမှာရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ် ။
1. Installation of Oracle Java 8 Installer
ပထမဆုံး Java ကို Install လုပ်ရပါမယ် ။ Java ကို Webupd8 Repository ကနေ Install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
***လိုအပ်မယ်ထင်လို့ထည့်ရေးပေးထားတာပါ။ တင်ပြီးသားဆိုရင် မလိုပါ ။
2. Installation of Oracle Glassfish 4
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Oracle Glassfish ကို Download ချမှာဖြစ်ပါတယ် ။
sudo curl -OL http://download.java.net/glassfish/4.1.1/release/glassfish-4.1.1-web.zip
ပြီးလျှင်ဖိုင်များကို unzip ပြုလုပ်၍ /opt/ အောက်ထဲကို ကူးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
sudo unzip glassfish-4.1.1-web.zip -d /opt/
ထို့နောက် cd ဖြင့် /opt/glasshfish4 ထဲဝင်လိုက်ပါ ။
Glassfish Server ကိုအောက်ပါအတိုင်း Start လုပ်ရမည်ဖြစ်သည် ။
sudo /bin/asadmin start-domain
ဒါဆို Browser မှာ ip_address:4848 ခေါ်လိုက်မယ်ဆို အောက်ပါအတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
အကယ်၍ Glassfish server ကို Secure ဖြစ်အောင် username နဲ့ password ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့
sudo bin/asadmin change-admin-password
Enter admin user name [default: admin]>admin <--- (default username က admin ပဲဖြစ်ပါတယ် ။)
Enter the admin password> <---Enter ပဲ ခေါက်လိုက်ရုံပါပဲ Default password မရှိပါဘူး
Enter the new admin password> <---Password အသစ်ထည့်ပါ။
Enter the new admin password again> <---Confirm Password
Secure admin setting ကို အောက်ပါအတိုင်း Enable လုပ်ပေးရပါတယ် ။
sudo bin/asadmin enable-secure-admin
ပြီးရင် Glassfish ကို Start and Stop လုပ်ပေးရပါမယ် ။ အမှန်ကတော့ Restart လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် ။ Restart မပါတဲ့အတွက် Start and Stop လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ် ။
sudo bin/asadmin stop-domain
sudo bin/asadmin start-domain
Waiting for domain1 to start …..
ip_address:4848 ကိုခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပါ ။
စောစောကပေးခဲ့တဲ့ username & password နဲ့ Login ဝင်ရမှာပါ ။
3. Deploying of GitBucket
ဆက်ပြီးတော့ Gitbucket ကို Glassfish မှာ Deploy လုပ်ပါမယ် ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Gitbucket ကို Download လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
curl -OL https://github.com/gitbucket/gitbucket/releases/download/3.11/gitbucket.war
ပြီးရင် gitbucket.war ဖိုင်ကို /tmp Folder အောက်ထဲကူးထည့်ပေးပါ။
sudo cp gitbucket.war /tmp/
ပြီးလို့ရှိရင် /var/lib/ အောက်မှာ gitbucket ဆိုပြီး Folder တစ်ခုဆောက်ပေးပါ ။
sudo mkdir gitbucket
ပြီးသွားရင်တော့ server_ip_address:4848 ကို ခေါ်ပြီး Glassfish ကို Login ဝင်လိုက်ပါ ။ ပြီးရင်
Configuration > server-config > System Properties ကိုသွားပါ ။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Add Property ကိုနှိပ်ပါ ။
Instance Variable name မှာ gitbucket.home
Default Value မှာ /var/lib/gitbucket လို့ထည့်ပေးပြီး Save လုပ်ပါ ။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Application ကိုသွားပါ ။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Deploy ကိုနှိပ်ပါ ။
ဒီလိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် ။ Local Packaged File or Directory That Is Accessible from GlassFish Server ကိုရွေးပြီး /tmp/gitbucket.war ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ ။ (အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလုပ်ခဲ့တယ်နော် 😉 )
ပြီးရင် OK နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ။ ဒါဆို Deploy လုပ်ခြင်းပြီးစီးပါပြီ ။ ဆက်ပြီးတော့ HTTP setting ပိုင်းကိုဆက်သွားပါမယ် ။
4. Setting up GlassFish network listener
Oracle Glassfish network listener ကို configure လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
Configuration > server-config > HTTP Service > Http Listeners > http-listener-1 ကိုသွားလိုက်ပါ ။
ပြီးရင် Advanced ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ။
HTTP Tab ကိုရွေးလိုက်ပါ ။
ဒီနေရာမှာ Gitbucket အတွက် Max Post Size ကိုသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ 20MB လောက်ထားရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ ပိုထားရင်လည်းရပါတယ် ။ ကျွန်တော်ကတော့ 20MB နဲ့ပဲလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် ။ Byte နဲ့ ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ 1024 x 1024 x 20 = 20971520 Bytes ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဖြည့်ပေးပြီးရင် Save လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ ။
ဒါဆိုရင် Gitbucket installation ပြီးစီးပါပြီ ။ ip_address:8080/gitbucket လို့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Gitbucket Home Page ကိုစမြင်ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ ပုံမှန် Github အသုံးပြုသလိုပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ ။
Default username က root ဖြစ်ပြီး password ကလည်း root ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အခုအနေအထားမှာ user တွေကတန်းပြီး Register လုပ်သုံးလို့မရသေးပါဘူး Admin Approval လိုပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ root account နဲ့ login ဝင်ပြီး System Administration > System Settings ထဲမှာသွားပြီး Setting တစ်ချို့ပြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။ ဒါတွေကတော့ Github သုံးတတ်တယ်ဆို ကျန်တာနားလည်သွားပြီမို့လို့ ထည့်မရေးပါပေးတော့ပါဘူး ။ ဒီလောက်နဲ့ပဲကျေနပ်ကြမယ်ထင်ပါတယ် ။
ဒီ Article အတွက် Hidekuro ကို Credit ပေးပါတယ် ။ မူရင်းQiita က Article ကိုမှီငြမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ် ။
***ဒီ Installation ကို Ubuntu 14.04 နဲ့ 15.10 ပေါ်မှာစမ်းသပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ။အဆင်မပြေတာ အခက်အခဲရှိတာမျိုးဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုအကြံပြုချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်ကိုအချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ။ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ubuntu Server Hardening Part – 2
အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါ G, H+, E, 3G နဲ့ LTE တိုအကြောင်း
Download Featured Ubuntu
Ubuntu 21.10 Install Demo
Tagged gnome, Linux, ubuntu